5 Waa in Alaab Sawir leh loogu talagalay Boho Chic Chic Wardrobe | Laga soo bilaabo 30, 40, & 50 - Buddhatrends
5 Waa in Alaab Sawir leh loogu talagalay Bohemiyan Qamiis Dharka ah
Bohemian isbedelka Haweenka Fikradda ah
Waxay dhahaan run nafta bohemianwaa midka ku qanacsan quruxda heer aad u qoto dheer. Qofka jacaylka ah, oo bilaash ah, oo leh meel aan ku nooleyn sanduuq, wuxuu jebiyaa xayawaanka oo wuxuu cambaareeyaa caadooyinka. Xigmaddan iyo xorriyaddani ma muujinayso oo kaliya habka uu qofku u noolyahay, laakiin sidoo kale waa muuqaal u eg qaabka dharka.
Caadi ahaan, haweenka da'doodu ka badan tahay, waxay ka badan yihiin inay jecel yihiin inay dhar gashadaan si caadi ah oo ujeedadoodu tahay inay u ekaadaan kuwa aan fiicnayn ee haweenka. Dunida nagu wareegsan, gaar ahaan adduunka moodada ayaa ah mid deg deg ah oo isbedel leh. Haweenay caqli-gal ah ayaa ogtahay sida loo sii xoojiyo aduunka aduunka iyada oo aan luminin dareenka gaarka ah. Sida boho weyn oo raba inuu abuuro dheelitirka u dhaxeeya xorriyadda iyo xasiloonida, waxaan soo gaadhay dhowr siyaabood oo lagu daro dhadhanka boof ee saxda ah ee ku habboon caadadaada caadiga ah.
Dharka dheer, Maxis, iyo Gowns:
Haweenka ku jira bartooda iyo dhammaadka 30aad ama xitaa ka baxsan, dhar gaaban oo qulqulaya oo lacag la'aan ah ayaa si aad ah ugu raaxaysta maalinta caadiga ah ee guriga, la saaxiibo ama safarka dukaanka. Xaqiiqdii, waxaad sidoo kale ka saari kartaa dhinaca xisbiyada leh farqiga midig maala.
Tusaale ahaan, labalaaba dharka maxi ah ee bohemian midabada midabada iyo ku xir xirmooyinka qaar ka mid ah, midabka dibnaha cusub, iyo dabaqyada casriga ah si aad u aragto wax xiisa leh oo hurdada wakhti kasta meel kasta.
Eeg Dharkan Dhar On Our Website
Kaarka dheeriga ah iyo kaarka la daabacay:
Baabi in midabada firfircoongive a youthful and fresh look to a woman’s persona. You don’t necessarily have to wear extra flashy and loud colors, but you certainly shouldn’t go for the dull and boring to look mature and elegant. Instead, use prints with multi colors and shades blended into beautiful patterns and styles. A vibrant mix of colors makes you look fresh, iyo maqaarka ayaa si fudud u eegaya jidhkaaga
Eeg Sawirkan Kaarka On Our Website
Inta badan dumarka qaangaarka ah waxay haweenka u shaqeeyaan waxayna u baahan yihiin inay u adeegsadaan khabiir xirfadeysan si joogto ah. Raadinta funky ma ahan mid macquul ah, laakiin dumarka boorka ah ee aad ku dhegi kartid surwaalka dharka caadiga ah iyo maqaarka qaawan. Ku dar mugdi ah boho si aad u dhalatid iyo maqaarkaaga oo si fudud u buuxiso hoosta jilibka sare iyo surwaal.
Kaftan Doolow / Dharka Boobka:
Dharkaasi waxay sidoo kale aad u jilicsan yihiin silhouette dabacsan iyo qaab-dhismeed. Qalabka dabacsan waxay u dhigtaa mid aad u jilicsan, neefta iyo waqti isku mid ah, waxay ku siin doonaan meel aad u qurux badan oo magaalada ah. Ku xir sida dharka ama labalaab leh surwaal adag.
Trousers & Palazzo Sare
Muddo tobanaan dabaqood oo ballaadhan ayaa ku raaxaysteen muuqaalkooda muuqaalka adduunka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo lagu daray iyaga gaar ahaan haddii aad tahay bohemian. Palazzo pants and loose pants are an ultimate companion for comfort in style. Then there are retro trousers and many more styles for you to select from as per the need and occasion.
Gargaarka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah wax soo saar. Ha u fiirsan dharkaaga laakiin kaliya ku dar kabaha saxda ah, boorsada gacanta, maro, iyo dahabka si aad u hesho muuqaal buuxa.
Pashmina casriga leh qaababka joomatari waxay u muuqdaan kuwo jilicsan jiilaalka iyagoo leh dhar dhaadheer, xajmiga, iyo maxis. Sidoo kale, bacaha iyo kabaha ayaa sidoo kale wax badan ku dari kara dharkaaga.
Qalabka dhamaystiran ee alaabta, booqo dukaanka internetka iyo inaad ku noolaato noloshaada Boho leh Buddhatrends. Ha ilaawin inaad akhrido cid kale posts blog!